Chengdu Taiyi Energy Technology Kuvandudza Co., Ltd.
Tsamba yakabva kuna Manager Lawrence
Chengdu Taiyi Energy Technology Development Co, Ltd. yakavambwa mu2011 uye yakabudirira mumhepo yehupfumi hwemusika. Kutora pane rakakosha basa rekuvandudza kweChina indasitiri yemagetsi mainjiniya, mushure memakore anopfuura gumi ekushanda kwakadzama uye kugadzirisa uye kuvandudza, China Electrical Injiniya yakawana kukura kweapaprog.
Iyo kambani yakashandira PetroChina neSinopec kwemakore mazhinji, uye yakazadzisa zvinotarisirwa uye yakazvipira kuzvirongwa zvikuru zvekunze. Kubva kune akazara michina yekutengesa uye sevhisi mupi kune hunyanzvi chigadzirwa mutengesi uye mushandi webasa kumusoro kumusoro mumusika weChina. Kuvandudzwa kweChina Electrical Engineering kwakatorwa kubva muhungwaru uye ziya revashandi vese veCLP, nekuda kwekudyidzana uye kutsigirwa kwevakabatana kubva kumatunhu ese ehupenyu, uye hazviparadzaniswe nerudo uye kuvimba kwevatengi vedu. Tichiri kugadzira mabhenefiti ehupfumi, kuzvipira kwedu uye kuita kwedu kushingairira kutora basa rehukama, kubatsira mukusimudzira hupfumi hwepasi rose uye budiriro yenharaunda, uye kubhadhara vashandi vese, vanobatirana kubva kumativi ese ehupenyu, uye vatengi nemhedzisiro yekusimudzira
Mukutarisana nekudzika kwazvino kweshanduko dzemumba uye kugadzirisa uye shanduko yehupfumi hwenyika dzepasi rose, China Electric iri kusangana nemikana mikuru nematambudziko. Kuti izvi zviitike, isu tichagara tichienderana nekumhanyisa kwenguva nenharaunda, kusimudzira hunhu hwehukama hwe "pragmatic uye inokatyamadza, shanduko uye shanduko, vanhu-vanotungamira, uye kuhwina-kuhwina kubatana", shinga kuvandudza, kufambira mberi " Chiono che "Bhizinesi" chiri kufambira mberi.